Vaovao - Tombony tombony ho an'ny laryngoscope ary fenitra fototra amin'ny fikarakarana Preanesthesia
Tamin'ny fipoahan'ny krizy COVID-19 tamin'ny fiandohan'ity taona ity, Jiangsu Mole Elektronika Elektronika dia nifantoka tamin'ny fanampiana ny filàna fitomboan'ny filàna fepetra fiarovana rehefa ny mpitsabo dia mitsabo ireo marary voasedra tsara. Mandritra ny fidirana an-tsokosoko, làlam-pitsaboana ilaina matetika amin'ny tranga tratran'ny aretina, dia mora voan'ny dokotera ny aretina noho ny akaiky ny toerana fampitana. Miaraka amin'ny laryngoscope horonan-tsary, ny orinasa dia manome fiarovana ho an'ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny famelana elanelana mihamitombo eo anelanelan'izy ireo sy ilay marary.
Video laryngoscopy na aiza na aiza SY isaky ny intubate ianao.
Ny laryngoscope no fampiasana tokana vaovao, laryngoscope horonam-peo azo alaina avy amin'ny Intersurgical, manome ny safidy laryngoscopy horonantsary ao amin'ny ER, ICU, fiterahana na ny tontolo iainana mialoha ny hopitaly.
Amin'ny alàlan'ny fampidirana elatra Macintosh, ny laryngoscope dia azo ampiasaina amin'ny laryngoscopy mivantana ary ny teknika fampidirana dia mahazatra sy voajanahary kokoa noho ny fitaovana misy elatra hyper-angulated. Ny endriny ergonomika dia manome antoka fa mora ampiasaina i-view, ary ny efijery LCD tsy miova dia manome fomba fijery tsara indrindra amin'ny fepetra maivana isan-karazany.
Amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ny tombony rehetra amin'ny laryngoscope an-tsarimihetsika feno amin'ny fampiasana tokana, vokatra azo ampiasaina, ny fitsaboana mole dia manome vahaolana mahomby.
Fenitra fototry ny fikarakarana PREANESTHESIA
Kaomity niandohana: Paramètre sy fenitra fampiharana (Nankatoavin'ny ASA House of Delegates tamin'ny 14 Oktobra 1987, ary nohamafisin'ny farany 28 Oktobra 2015)
Ireo fenitra ireo dia mihatra amin'ny marary rehetra izay mahazo fikarakarana fanatoranana. Amin'ny toe-javatra miavaka dia azo ovaina ireo fenitra ireo. Raha izany no izy, dia hosoratana ao amin'ny rakitsoratry ny marary ny toe-javatra.
Ny manam-pahaizana momba ny fanatoranana dia tompon'andraikitra amin'ny famaritana ny toetoetran'ny marary sy ny famolavolana drafitra fikarakarana fanatoranana.
Ny mpitsabo fanatoranana, alohan'ny fanaterana ny fitsaboana fanatoranana dia tompon'andraikitra amin'ny:
1. Famerenana ny rakitsoratra ara-pitsaboana misy.
2. Fanadinadinana sy fanaovana fanadinana mifantoka amin'ny marary mankany:
2.1 Miresaka momba ny tantaram-pitsaboana, anisan'izany ny fanandramana fanatoranana teo aloha sy ny fitsaboana ara-pahasalamana.
2.2 Tombano ireo lafiny amin'ny toe-batana misy ny marary izay mety hisy fiantraikany amin'ny fanapahan-kevitra momba ny loza mety hitranga sy ny fitantanana.
3. Manafatra sy mandinika ny fitsapana sy ny fakan-kevitra azo atao ilaina amin'ny fanomezana fitsaboana anesthesia.
4. Manafatra fanafody mialoha ny fandidiana.
5. Manome toky fa azo ny fanekena amin'ny fitsaboana anesthesia.
6. Ny firaketana an-tsary ny tabilao izay efa voalaza etsy ambony.
Fotoana fandefasana: 26-07-21